Intente Camping manzi, Sleeping Bag, yepikniki Ingubo, Beach ithawula - okuhlala ententeni Green
ibhegi yokulala yokubaleka
bag imvulophu olele
bag Mama sleeping
ithawula owomileyo quick
ezintsha eqinisa zone & pas link
Real House ententeni
kwizinga eliphezulu ultralight bag Ma sleeping
soccer feature yokuphumula ingubo
Nokuba intente waterproof akuxhomekekanga kuphela ezinxulumene ikholam amanzi angakanani laphu, awona abalulekileyo uyilo nokusetyenzwa. Ikhala lula, kodwa ke ezininzi ezintenteni bathengi amanzi, wona ekhankanywe column amanzi 5000mm. Enkosi izixhobo test imvula ngaphakathi, ezenza kube lula ukuba imvula ukukhanya kuhla nini na, oko kusinceda sikwazi ukufumana nayiphi na ithuba evuzayo ukuqinisekisa ukuba babe nako ukuvelisa ngokupheleleyo intente manzi.
Yintoni ukwakhiwa lokuthunga bag zakho zokulala? Ngaba loo mthombo kufanelekile ukuba injongo yakho? Ngaba nomthengisi wakho ndinixelele apho ukwakhiwa sisetyenziselwa ibhegi zakho zokulala kunye inkalo zokwakha nganye? Ngokuqhelekileyo, kukho 2 izakhiwo ezahlukileyo kwimarike, egumbini H kunye kabini H chamber.The H Chamber na ulwakhiwo elula futhi ethandwa, ukuthunga iqokobhe, yokwambathisa akhande kunye ngqo. Le yokwakha luqhele ukusetyenziswa njengezibonelo zasehlotyeni-emthonjeni.
Ngaba uyazi ukuba bangaphi kunokudala ingubo yakho zepikniki, yintoni ngaphakathi? Yintoni inkalo ingubo nganye ezahlukeneyo nepikiniki? Yinto eqhelekileyo yenzani ngale ndlela. Acrylic, eboyeni Polar & ipholiyesta iprintwe njengoko izinto phezulu, PE & ngefoyile ye-aluminiyam, PEVA, manzi Oxford njengoko ezantsi. Isiponji & ipholiyesta ifayibha ezibonakalayo phakathi. Ezinye Ipikiniki ingubo kuphela maleko-2. Ungafumana izinto ezahlukileyo emarikeni, kuba thina ke, akukho ngxaki. Yokuvelisa ngaphezulu kwe 1.000.000 zokulala zepikniki ezahlukeneyo, mna ukuzithemba item okulungileyo ngenxa yenu. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, nceda ujonge kwi FAQs okanye uqhagamshelane nathi.
Ukwakha 1, ipaka beitang mveliso, hehai Road, Changzhou, Jiangsu kwiphondo, China
Ungasenza njani isikhwama sokulala ukuze ulingane ...
Uyivelise njani ibhegi yokulala anti-snag